အဆိုပါဖက်ရှင်ကမ္ဘာတွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်လူများစွာတဖက်သတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်များတစ်တွေအများကြီး, အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များတွေအများကြီး - ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်ရှိသည်ဖို့, ဒီအပေါငျးတို့သအတွက်နားလည်သလော လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဤမေးခွန်းကို, ဖြေဆိုခြင်း, သင်ဖက်ရှင် icon ကိုနှင့်စတိုင်ဟုခေါ်ကြသည်သောသူတို့အဖို့အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
20 ရာစု style icon များ
အဘယ်သူ၏အခွင့်အာဏာကိုဖက်ရှင်လောကရှိလူများစွာသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာတာတော့သေချာတယ်ဖြစ်ပါတယ်အမည်များရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အာဏာများနှင့်အမှန်တကယ်ဖက်ရှင် icon ကိုခိုခို Chanel ဖြစ်လာ၏။ အဘယ်သူသည်ပုလဲတစ်ရှည်လျားသော string ကိုအတူသူမ၏နည်းနည်းအနက်ရောင် muslin မသိသနည်း? ဒါဟာဒီဇိုင်နာများသာအချို့ခေတ်သစ်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်, ယခုအရေးကြီးပါသည်။ နှင့်သူမ၏ကျော်ကြားဝတ်စုံ? ဂရိတ်ကိုကိုးကျွန်းကမ္ဘာတွင်မယ့်အဝတ်အစားကို ပေး. , သူမရဲ့စတိုင်တင်ဆက် - ကြော့ရှင်း, အလှအပနှင့်ဣတ္တစ်ဦးစတိုင်။
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအ 50s ၏အိုင်ကွန်စတိုင်, သင်တန်း, ပါဝင်သည် Greta Garbo နှင့် Marlene Dietrich ။ ဒါဟာနေဆဲနောက်လိုက်ဖို့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်, အဘယ်သူ၏စတိုင်အမြဲယင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်မှတ်မိခဲ့ Jacqueline Kennedy က - လက်အိတ်, နေကာမျက်မှန်, တစ်ဦးဦးထုပ်, တက်ဘလက်, သုံးလေးပုံတပုံအင်္ကျီလက်နှင့်အတူတစ်ဦး trapezoidal စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ။
အခွင့်အလမ်းကစတိုင်လ်အိုင်ကွန်ကိုချေါပွီး Marilyn Monroe ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူကားအဘယ်သူလေးစားခြင်းနှင့်လေးစားနေဆဲအလွန်ဣတ္ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး sexy မတ်မတ်မဟုတ်လော သူမ၏စတိုင်လ် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အာရုံငါးပါး၏ဂျ။
ဆိုဗီယက်ရုပ်ရှင်ရုံ Lyubov Orlova များ၏မင်းသမီးဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်ဆိုသည်ကား, သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ကြီးမြတ်ရဲစွမ်းသတ္တိ - ဒါဟာစတိုင်အိုင်ကွန်, အချိန်နှင့်နိုင်ငံတွင်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောတစ်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ပွိုကက်သရင်း Deneuve - စတိုင် icon များ, ဒါပေမယ့် 60-ies စေရန်, မှန်ကန်စွာအခြားအကြီးအမင်းသမီးစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်အလွန်ကြီးစွာသော Yves Saint Laurent ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်မူဆယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏စတိုင်လ် - အတူတူပင်ပြင်သစ် - အမျိုးသမီးများ၏ maddening သန်းပေါင်းများစွာ။ classical လက်ရာမြောက်သောအကျီ, အဝတ်, MIDI, အရောင်များ soothing စုံလင်ဖြတ်, တိပုံစံ - က၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ တကယ့်ပြင်သစ်အဖြစ်, Madame အဆိုပါတင်းကျပ်စွာကြယ်သီးစားဆင်ယင်အတွက်ဣတ္နှင့် seductive image ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဘူး။ အခုမင်းသမီးနှင့်မသက်ဆိုင်အသက်ကြီးသောကြည့်, နောက်ကိုလိုက်ရန်ကမ္ဘာ၏နမူနာဖြစ်ပါသည်။
ခြေ Hepburn ရေ့ကယ်လီ, ဂျစ် Bardot, Twiggy (Lesley Hornby) - ထိုအဖြစ်ကောင်းအခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ် 60-ies ၏စတိုင် icon များဖြစ်လာကြပါပြီသောအမည်များဖြစ်ကြသည်။
အဲဒီမှာလွန်းသစ်တစ်ခုရာစုရောက်လိမ့်မည်စတိုင်နှင့်ဖက်ရှင်လောကီသားတို့သည်အထဲတွင်ထူးချွန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကအမြဲဆင်မြန်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ကြော့ရှင်းသပိတ်မှောက်, အိန်ဂျလီနာဂျိုလီများ၏အမည်များကိုကြားတော်မူပြီ ကိတ်မော့စ်, တစ်ဦး $9သန်း (နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ) ရက်နေ့တွင်ဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီထိပ်တန်းနှင့်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့သားရေဂျာကင်အင်္ကျီအတွင်းကြည့်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ; ၎င်းတို့၏အမျိုးစုံရစတိုင်နှင့်အတူမာရိသညျကိတ်နှင့်အက်ရှလေ Olsen ။
ခေတ်မီစတိုင်မှ icon တွေကိုရည်ညွှန်းနှင့်ကိတ် Middleton နိုင်ပါသည်။ သူမ၏စံပြဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါလျှင်အဘယ်သူသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူမမယား့မင်းသား, ဒိုင်ယာနာ Spencer ၏သားမဟုတျပါဘူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ နေဆဲစတိုင်ပြိုင်ဘက်ကင်းမိဖုရားဖြစ်သောအလွန်တူညီသမ္မတကတော် Di ။ တမင်တကာသို့မဟုတ်မ, ဒါပေမယ့်ကိတ်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာရဲ့သမီး၏ status ကိုက်ညီတဲ့ဖို့ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဖက်ရှင်များ၏ခေတ်မီစတိုင် icon များမှအချို့သောဝေဖန်သူများကရေတွက်ပြီးမှစတင်ခဲ့ပြီး, နှင့်အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ဇနီးမီရှဲလ်အိုဘားမားဟာ။
တစ်မူထူးခြားသော image ကိုဖန်တီးရန်မတင်းကျပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါသည်။ မိမိအမူထူးခြားတဲ့စတိုင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏အခြေခံ - ကောင်းကောင်းကိန်းဂဏန်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်တစ်လောကလုံးအခြေခံအမှုအရာများ Locker အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခြင်း။ ထိုအဖြစ်ကောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့ - ဖက်ရှင်မှလုယူရာဥစ္စာလဲဒါမှမဟုတ်စျေးကြီး branded အမှုအရာကိုလိုက်ကြပါဘူး။ စတိုင်ဖြစ်ခြင်းစျေးကြီးသောအရာတို့ကိုရှိသည်ဖို့သာမဆိုလိုပါ။ နောက်ထပ်ဆုံးသော Chanel ကဆိုသည်: "ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း - စတိုင်ရှိသည်ဖို့မအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ " အတော်များများကစတိုင်အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြသည်မဟုတ်။ အချိုးအစားနှင့်အရသာတစ်အဓိပ္ပာယ် - ကြောင်းစတိုင်၏အခြေခံပါပဲ။
အဝလွန်အမျိုးသမီးများဘောင်းဘီ - ကိုအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
စားဆင်ယင်၏ Boho စတိုင်
ကျားသစ်စားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
တစ်ကော်လာ 2013 နှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်
Saskatoon - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Buckthorn ဖျော်ရည် - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
မီဒီယာကိုယ်ဝန်ဆောင် Marilyn Monroe ၏ဓါတ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Cystitis - လုံခြုံထုတ်ကုန်များနှင့်4အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်း
မည်သို့ပါးလွှာ Alina Kabaeva?